[Scroll down for text in ENG] ဥပဒေအရာရှိများကို ၄င်းတို့၏ အမှုလိုက်တာဝန်များကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ပြည်သူများ၏ ဥပဒေဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ် ပေးနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ လက်စွဲစာအုပ်ကို UK Aid ၏ ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးမှုနှင့် UNDP ၏ နည်းပညာ ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့် ထုတ်ပြန်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ လက်စွဲစာအုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့် စီရင်ထုံးများပေါ် မူတည်၍ ရေးဆွဲထားပြီး နိုင်ငံတကာမှ အကောင်းဆုံး အမူအကျင့်များကို ရည်ညွှန်း ရေးဆွဲထားပါသည်။ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် လက်စွဲစာအုပ် မိတ်ဆက်ထုတ်ပြန်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မိတ်ဆက်ထုတ်ပြန်ပွဲအခမ်းအနားကို ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တရားသူကြီးများ၊ အမှုလိုက်များ၊ ရဲအရာရှိများနှင့် ရှေ့နေများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထုတ်ပြန်ပွဲ အခမ်းအနားအပြီးတွင် အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ကာ အမှုကိစ္စရပ်များတွင် မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများကို ပိုမိုလိုက်နာလာနိုင်စေရန် လက်တွေ့ ဆောင်ရွက် နိုင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ မိတ်ဆက်ထုတ်ပြန်ပွဲ အခမ်းအနားများကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ မျှတသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများ လက်စွဲစာအုပ်ကို တွင် www.oag.gov.mm ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ------------------------------ To help law officers perform their prosecution functions effectively and protect the legal rights of the people in accordance with the law, the Union Attorney General’s Office has officially launched Fair Trial Guidebook for Law Officers, with the financial support from the UK Aid and technical support from UNDP Myanmar. The guidebook is based on due process founded almost entirely upon Myanmar’s national laws and constitutional articles while taking references to international best practices. The fourth regional launch was conducted in Taunggyi, Shan State on 15th March with the participation of the Shan State’ Government, Union Attorney General’s Office, local judges, prosecutors, polices officers, and lawyers. The launching ceremony was followed by group discussions on how they can contribute to improve the quality of the criminal prosecution process in alignment with the principles outlined in the Fair Trial Guidebook. The Fair Trial Guidebook was launched including Rakhine, Mandalay and Kachin. It can be downloaded from the UAGO website at www.oag.gov.mm. Cc: UK in Burma DFID - UK Department for International Development Union Attorney General Office At Naypyidaw
Thursday, 06:25 AM, EDT
[Scroll down for text in ENG] စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆေးပေးခန်းများ၊ လမ်းများ၊ တံတားများမှ အစပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူများတွင် လိုအပ်ချက်များ အများအပြား ရှိနေပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရ၏ ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် (UNDP) သည် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၅ ခုတွင် ပြည်သူများအတွက် လိုအပ်သော အခြေခံ လိုအပ်ချက်များကို အားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီး တာဝန်ယူမှုရှိသော ဆောင်ရွက်ချက်ဖြင့် မြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။ “ပြည်သူပါဝင်သော မြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” များကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၅ ခုဖြစ်သော ဂွ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရမ်းဗြဲ၊ သံတွဲနှင့် တောင်ကုတ် မြို့နယ်များတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန အသီးသီးမှ အကြီးအကဲများ၊ ပြည်သူများမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆယ်အိမ်ခေါင်းများ စသည်ဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ အားလုံးသည် ၄င်းတို့ ဒေသ အသီးသီးရှိ လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြဆွေးနွေးခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပွဲများတွင် မြို့နယ် အသီးသီးသည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြို့နယ်လူထုများ အားလုံးသို့ အသိပေးရှင်းလင်း တင်ပြခြင်း အခမ်းအနားများကို မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဂွ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရမ်းဗြဲ၊ သံတွဲနှင့် တောင်ကုတ် မြို့နယ်များတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ------------------------------ From schools to health centers, from roads to bridges, there are different needs to respond to people in Myanmar. With the financial support of the Government of Japan, UNDP is supporting five townships in Rakhine to put in placearesponsive township administration that provides basic services to the communities in an inclusive and accountable manner. ‘Participatory Township Planning Workshops’ were conducted in five townships of Rakhine State - Gwa, Ponnagyun, Ramree, Thandwe and Toungup from December 2018 to February 2019. Key stakeholders such as heads of sector departments, elected ward and village tract administrators, members of the parliament, civil society representatives and 10 household leaders participated in the planning process. All participants could express the most pressing needs in their communities and each township developedaplan that includes the different priorities for 2019-2020. On March 15th, at the ‘Township plan Public Presentation’ held in each of the five townships, the public was informed about the priorities and projects which will be implemented in 2019-2020. Cc: Japan - The Government of Japan 在ミャンマー日本国大使館/Embassy of Japan in Myanmar
19 March, 11:13 PM, EDT